ယမန်နေ့ ဇူလိုင် ၂၆ ရက်တွင် သက်တမ်း ကုန်ပြီဖြစ်သော မြန်မာ့သွင်းကုန်များ ပိတ်ပင် တားမြစ်ထားသည့် ဥပဒေနှင့် ပတ်သက်၍ အမေရိကန် နိုင်ငံရေး သမားများအကြား သဘောထား ကွဲပြားနေသဖြင့် သက်တမ်း ထပ်တိုးရန် ခက်ခဲနေသည်။
ဝါရှင်တန်မှ လာသော သတင်းများအရ ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင် ကွန်ဂရက်မှ ထောက်ခံ တင်ပြပြီး သမ္မတက လက်မှတ်ထိုး အတည်ပြု ပြဌာန်းခဲ့သော မြန်မာ့ လွတ်လပ်ရေးနှင့် ဒီမိုကရေစီ အက်ဥပဒေ (BFDA) ကို နှစ်စဉ် အမေရိကန် နိုင်ငံရေးပါတီ ၂ ပါတီ ပူးပေါင်း သဘောတူ သက်တမ်းတိုး လာခဲ့သော်လည်း ယခု ၂ ပါတီအကြား သဘောကွဲပြီဟု ရီပတ်ပလီကန် ပါတီခေါင်းဆောင် အထက် လွှတ်တော်အမတ် မစ်ချ် မက်ကောနယ်၏ ထုတ်ဖော် ပြောဆိုချက်က သက်သေပြနေသည်။
“ဆီးနိတ် အနေနဲ့ မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေးနဲ့ ဒီမိုကရေစီ အက်ဥပဒေကို သက်တမ်းထပ်တိုးဖို့ သဘောတူညီမှု မရှိတာ ကျနော် အင်မတန် စိတ်ပျက်မိတယ်” ဟု မစ်ချ် မက်ကောနယ်က ရေးသား ထုတ်ပြန်ထားသည်။
Reuters သတင်းတပုဒ်၏ အဆိုအရ ဩဂုတ်လ ကွန်ဂရက်တွင် ဆက်တိုက် ဆွေးနွေးမည့် ဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာ အဆိုပြုချက် တခုတွင် မြန်မာပြည်နှင့် ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ အက်ဥပဒေကို အာဖရိကန် ပို့ကုန် တင်သွင်းခွင့် အက်ဥပဒေနှင့် ချိတ်ဆက်ထားပြီး သမ္မတ အိုဘားမား အစိုးရက ထောက်ခံထားကြောင်း သိရသည်။
မစ်ချ် မက်ကောနယ်က မြန်မာကို သီးခြားခွဲထုတ်ပြီး အဆိုပါ အက်ဥပဒေကို ထပ်မံ သက်တမ်းတိုးရန် လိုလားနေပြီး အထက်လွှတ်တော် ဘဏ္ဍာရေး ကော်မတီကလည်း မြန်မာနိုင်ငံမှ ကုန်ပစ္စည်း တင်သွင်းခြင်းကို တားမြစ်သည့် အရေးယူမှု နောက်ထပ် သက်တမ်း ၃ နှစ် ထပ်တိုးရန် ဆန္ဒမဲ ပေးခဲ့သည်။
ယင်းဥပဒေ၏ အဆိုအရ နှစ်စဉ် သက်တမ်းတိုးရမည် ဖြစ်ပြီး သက်တမ်းတိုးရက် မတိုင်မီ သက်တမ်းမတိုးနိုင်ပါက အလိုလို ပျက်ပျယ်သွားမည် ဖြစ်သည်။
တချိန်တည်းမှာပင် မြန်မာပြည်မှ သွင်းကုန်များ အပေါ် အမေရိကန်နိုင်ငံက ပိတ်ပင်ထားမှုကို ရုပ်သိမ်းရန် ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံ ကုန်သည်များနှင့် စက်မှုလက်မှု လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းချူပ် (UMFCCI) အဖွဲ့ဝင် လုပ်ငန်းရှင်ကြီး များက လိုလားနေ ကြသည်။
အမေရိကန် ကုမ္ပဏီကြီးများ မြန်မာနိုင်ငံ၌ လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခွင့်နှင့် ကုန်သွယ်ခွင့်ကို အမေရိကန်အစိုးရက ခွင့်ပြုခဲ့ သော်လည်း မြန်မာပို့ကုန်များ တင်ပို့ခွင့်ကို ဆက်လက် တားမြစ်ထားသည်မှာ မမျှတကြောင်း၊ နှစ်နိုင်ငံ ကုန်သွယ်ရေး၌ အပြန်အလှန် သဘော မသက်ရောက်သည့်အတွက် ပယ်ဖျက်ပေးရန် လိုကြောင်း UMFCCI ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းအောင်က ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
“မျှတဖို့ လိုတယ်လို့ ထင်တယ်၊ ကျနော်တို့ကိုတော့ ကုန်သွယ်ခွင့်မပေးဘူး၊ သူတို့ကတော့ ကုန်သွယ်မှုရတယ်ဆိုတော့၊ တဘက်သတ် ကုန်သွယ်မှုမျိုးကတော့ မထားသင့်ဘူး” ဟု ၎င်းကဆိုသည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံနှင့် ကမ္ဘာ့အလုပ်သမား အဖွဲ့ (ILO) တို့ ထောက်ပြ ပြောဆိုနေသကဲ့သို့ လယ်မြေ အဓမ္မသိမ်းဆည်းမှု၊ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှု၊ အဓမ္မ လုပ်အားပေးခိုင်းစေမှု၊ ကလေး အလုပ်သမား ပြဿနာ၊ အလုပ်သမား အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုများသည် မြန်မာ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းတွင် ရှိနေကြောင်း၊ ထိုအချက်များကိုလည်း ပို့ကုန် ထုတ်လုပ်သူများက လိုက်နာရန် လိုအပ်ကြောင်း ဦးဝင်းအောင်က ပြောသည်။
အထူးသဖြင့် အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းမှ ထွက်ကုန်များ တင်ပို့ခွင့် ပိတ်ပင်ထားမှုကို ဖွင့်ပေးစေချင်ကြောင်း၊ ၎င်းလုပ်ငန်းသည် မြန်မာအမျိုးသမီး များ၏ စားဝတ်နေရေးနှင့် လုံခြုံရေးအတွက် အသက်မွေး ဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းတခုဖြစ်ကြောင်း၊ ပြည်ပပို့ကုန် လုပ်ငန်းများ တိုးတက် ဖွံ့ဖြိုးမှသာလျှင် ပြည်သူများ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ပေါများလာမည် ဖြစ်ကြောင်း ဦးဝင်းအောင်က ရှင်းပြသည်။
BFDA အက်ဥပဒေကို ၂၀၀၃ ခုနှစ် ဒီပဲယင်း အရေးအခင်း ဖြစ်ပွားပြီးနောက်ပိုင်း ဇူလိုင် ၂၈ ရက်နေ့တွင် အတည်ပြုခဲ့ပြီး မြန်မာ့ပို့ကုန်များ ပိတ်ပင်ခြင်း၊ ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှု ပိတ်ပင်ခြင်း၊ စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်များ၊ အပေါင်းအပါများ၊ မိသားစုဝင်များကို ပြည်ဝင်ခွင့် ပိတ်ပြီး အမေရိကန်တွင်ရှိနေသော ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ထိန်းသိမ်းထားခြင်းများ ပါဝင်သည်။
၂၀၀၇ ရွှေဝါရောင် တော်လှန်ရေး လှုပ်ရှားမှုကို သွေးထွက်သံယို ဖြစ်စေသည်အထိ မြန်မာစစ်အစိုးရက နှိမ်နှင်းအပြီး မြန်မာ့ကျောက်မျက် တင်သွင်းမှုအက်ဥပဒေ Junta’s Anti-Democratic Efforts (JADE) ကို ၂၀၀၉ ခုတွင် ပြဌာန်း အတည်ပြုခဲ့သည်။
သို့ရာတွင် သမ္မတ အိုးဘားမား အစိုးရအဖွဲ့အနေဖြင့် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရ၏ လတ်တလော ဖြစ်ထွန်းနေသော မြန်မာ့နိုင်ငံရေးနှင့် စီးပွားရေး မူဝါဒ အပြောင်းအလဲများကြောင့် သံအမတ် ပြန်လည်ခန့်အပ်ပြီး ပိတ်ဆို့မှုများကို စတင် လျှော့ချနေကာ အမေရိကန် ကုမ္ပဏီများ မြန်မာပြည်တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် ပြန်လည်ခွင့်ပြုလိုက်သည်။
ပြီးခဲ့သည့် တပတ်က မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန် သံအမတ် ဒဲရစ်မစ်ချယ်နှင့်အတူ အမေရိကန်စီးပွားရေး ကုမ္ပဏီကြီးများ ဖြစ်သော General Electric (GE)၊ ကိုကာကိုလာ အချိုရည်၊ စက်ယန္တရား ထုတ်လုပ်သည့် Caterpillar ကုမ္ပဏီ၊ ဘဏ် လုပ်ငန်း Goldman Sachs၊ Ford ကား ကုမ္ပဏီနှင့် Google အပါအဝင် လုပ်ငန်းပေါင်း ၇၀ ခန့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် လာရောက် လေ့လာခဲ့ကြသည်။
မြန်မာပို့ကုန်များ ပြန်လည် တင်သွင်းခွင့် ပေးခြင်းသည်လည်း ပြည်တွင်း အလုပ်လက်မဲ့နှုန်း လျှော့ချရေးအတွက် အရေးပါမှုကို သိရှိသဖြင့် သမ္မတ အိုဘားမား အစိုးရအနေဖြင့် အသေးစိတ် သုံးသပ်လေ့လာ နေကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန် သံအမတ် မစ္စတာ ဒဲရက်မစ်ချယ်က ပြောဆိုသည်ဟု Myanmar Times သတင်းတပုဒ်က ဆိုသည်။
အမေရိကန်အနေဖြင့် မြန်မာ့ပို့ကုန်၊ အထူးသဖြင့် အဝတ်အထည် များကို ၂၀၀၄ ခုနှစ် မတိုင်မီက တင်ပို့ခဲ့ရာ ၂၀၀၂ ခုနှစ်တွင် အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၃၅၆. ၄ သန်း၊ ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင် ၂၇၅. ၇ သန်းဖိုးအထိ ရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာ အထည်ချုပ် လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်း ဥက္ကဋ္ဌ ဦးမြင့်စိုးက ပြည်သူများ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ရရှိပြီး လူနေမှုမြင့်မားစေရန် အတွက် အမေရိကန်နိုင်ငံက ပို့ကုန်လုပ်ငန်း ပြန်လည်ဖွင့်ပေးခြင်း သည်လည်း အရေးပါသည်ဟု ဆိုသည်။
“ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ လာလို့ အလုပ်အကိုင်တွေ ရတယ်ဆိုတာလည်း မှန်တာပဲ။ သူတို့နိုင်ငံ ဈေးကွက်ကို ဖွင့်ပေးလိုက်ရင်လည်း အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းတွေ ရလာမှာပဲ” ဟု သူက ပြောသည်။
လက်ရှိ မြန်မာ အဝတ်အထည်များကို ဂျပန်၊ ကိုရီးယားနှင့် ဥရောပ နိုင်ငံများသို့ တင်ပို့နေသည်။
ယခုအခါ တရုတ်နိုင်ငံ တောင်ပိုင်းတွင် အခြေစိုက်သည့် နာမည်ကြီး အဝတ်အထည် ကုမ္ပဏီ Adidasက တရုတ်ပြည်မှ စက်ရုံကို ပိတ်၍ လုပ်အားခ ဈေးသက်သာသည့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဖွင့်လှစ်ရန် စီစဉ်နေသည်ဟု လည်းသိရသည်။
Topics: Export, Sanction, USA